SimpleTexting: Qalab SMS iyo Farriin Qoraal | | Martech Zone
Helitaanka soo dhaweyn farriin qoraal ah laga bilaabo nooc aad siisay rukhsad ay u noqon karto mid ka mid ah xeeladaha suuqgeynta ee ugu waqtiga iyo waxqabadka badan ee aad hirgelin karto. Suuq Geynta Farriinta Qoraalka ganacsiyada ayaa maanta u adeegsanaya:
Iibinta - U dir dallacsiinno, qiimo dhimis, iyo dalabyo waqti-xaddidan si loo kobciyo dakhliga
Samee Xiriiro - Bixi adeegga macaamiisha iyo taageerada wada sheekaysiga 2-dhinac ah
Kaqeybgal dhageystayaashaada - Si dhakhso leh ula wadaag cusboonaysiinta muhiimka ah iyo waxyaabaha cusub
Abuur Farxad - Marti-geli cod-bixinta-ku-guuleysiga cod-bixinta ama cod-bixinta-cod-bixinta
Ururi Hogaaminta - U oggolow macaamiisha mustaqbalka in ay iska soo qoraan qoraalada ama ay u soo diraan su'aalo hal mar ah
Kobcinta Hogaamiyaasha - La soco raadadka oo ku sii wado iyaga oo ku mashquulsan qoraalka marmar
Mar walba ma hubinno emaylkeena ama ogeysiisyada kale, laakiin shaki yar ayaa ka jira sida aan uga jawaabno farriinta qoraalka.
98% ee fariimaha qoraalka ah waa la furay, xiriiriyeyaasha waxay helayaan celcelis ahaan CTR 17, celceliska celceliska celceliska SMS-ka wuxuu ku saabsan yahay 45%!
Heerarka Beddelka SimpleTexting SMS
Daraasad kiis kadib daraasad kiis waxay bixisaa caddayn wax ku oolnimada suuqgeynta farriinta qoraalka. In kasta oo marin u helka lambarka taleefanka qaataha ay caqabad ku noqon karto in ka yar emaylka, haddana waxaan shaki ku jirin kordhinta hawlgelinta.
39.5% ka mid ah dadkii la daraaseeyay ayaa sheegay in suuq geynta SMS-ka ay bixiyaan sicir furan oo ka sareeya suuq geynta emaylka
Warbixinta Suuq-geynta SimpleTexting SMS
Haddii aadan aqoon u lahayn eraybixinta iyo teknolojiyadda ka dambeysa farriinta qoraalka, waxaan dulmar guud ka qornay SMS halkan iyo sidoo kale eraybixinta la xidhiidha tikniyoolajiyadda.
Oggolaanshaha la muujiyey
Udub dhexaadka suuq geynta SMS waa fasax. In kasta oo wadiiqooyinka kale ay leeyihiin shuruudo sharci oo lagu xirayo ama looga baxayo ololeyaasha, riixista farriinta lambarka taleefanka gacanta waxay u baahan tahay shuruudo sharci ogolaansho la muujiyey ka socda macmiilka.
Macmiilku wuxuu ubaahan yahay inuu bilaabo codsashada xulashada, taas oo ku dhici karta calaamado (qoraalka SUUQA 71813), iyada oo loo marayo badhanka gujinaya-qoraalka ee hantida dijitaalka ah, foomamka websaydhka, suuqgeynta emaylka (oo laga yaabo inay leeyihiin guji-qoraalka) ama guji foomka websaydhka ah), Facebook Lead Gen Ads, Text-to-Vote ama Text-to-Win Concepts, ama xitaa jeega POS.
Inta badan xambaarayaasha sidoo kale waxay sida caadiga ah u baahan yihiin bayaanno gaar ah oo gaar ah waxayna leeyihiin baahiyo data oo aad loo qeexay. Qaybta ugu muhiimsan ee la shaqeynta suuq geynta suuq geynta SMS-ka ayaa u hoggaansameysa qawaaniintaas iyo tilmaamaha madal.
Sidee ayey Suuqgeynta SMS u gaar tahay?
Farriinta qoraalka ayaa xoogaa ka duwan aragtida isgaarsiinta suuqgeynta:
gaaban - SMS waa soo gaabinta Nidaamka Fariinta Gaaban. Dabeecada xadid hal fariinta waa 160 xaraf. Inta badan taleefannada casriga ah iyo shabakadaha waxay taageeraan isku duubni si ay dhab ahaan u kala qaybin karaan una dhisi karaan farriimaha illaa 1600 xaraf. Marka lagu daro cabbirka shaashadda, farriinta qoraalka ayaa aad uga duwan noocyada kale ee farriimaha. MMS, dabcan, waxay awood u siineysaa awooda inaad ku dirto sawirro, gifs firfircoon, iyo fiidiyowyo (oo leh xaddidaad cabbirka qaar).
waqtiga - Xaqiiqda ah in fariin qoraaleed si toos ah loogu dhiibo moobilka… sida caadiga ah gacantaada ama aad ugu dhow. Marka ay timaado waqtiga, taasi waa qodob muhiim u ah istiraatiijiyadaada fariimaha qoraalka. Tusaale ahaan, haddii ay ahayd inaad kaxaysato kaqeybqaadasho iyo wacyigelin waqti aad u kooban, moobaylka ayaa aad uga fiican. Emailka, tusaale ahaan, lama arki karo saacado ama xitaa maalmo marka loo eego fariinta qoraalka.
Location - In kasta oo farriinta qoraalka aysan ku tiirsanayn goobta juqraafiyeed ee aaladda, haddana ganacsiga maxalliga ahi wuu ku kala duwanaan karaa taleefanka gacanta. Tusaale ahaan, ku riixitaanka sicir-dhimista dukaanka tafaariiqda waxay wadi kartaa taraafikada degdegga ah ama codsi dib-u-eegis ah maadaama qofka adeegga guriga ka tagayaa uu ka tagayo goob shaqo. Dabcan, meheraddaadu waxay isticmaali kartaa lambar maxalli ah ama bilaash ah. Waad kiraysan kartaa lambar gaaban oo qaas ah sidoo kale.
Haddii aad raadineysid mashiin si rasmi ah ugu shaqeeya farriinta qoraalka, SimpleTexting wuxuu ku hogaaminayaa warshadaha awoodaha iyo isku dhafka, oo ay ku jiraan:
U soo dir Ololayaasha SMS iyo MMS - Fariin qoraal ah ugu dir koox xiriiriyaha ah. Ku dar sawirro, shaqsiyaadka qoraalkaaga u gaar yeelo, oo raad raac cidda riixday xiriiriyeyaashaada.
Hayso Wadahadal Laba-geesood ah - U qor qoraalka waqtiga-dhabta ah ee macaamiisha. Hel lambar cusub ama qoraal-karti u siiya midka jira. (Adigoon saameyn ku yeelan adeeggaaga codka.)
Dhis Liis ama Adigaaga soo rar - Ku dar xiriirada aad hadda leedahay oo isticmaal astaamo sida qoraal-ku-faafaahin si aad si dhaqso leh ugu ururiso lambarrada taleefannada.
Tilmaamaha Muhiimka ah ee SimpleTexting
Xeerarka Gaaban - Kaydso mid ka mid ah liistada-kooban ee nambarkeedu yahay SMS-ga ganacsigaaga ama ururkaaga. Way fududahay in la xasuusto waxayna ku fiican yihiin kiisaska isticmaalka mugga badan.
2-Jidka Fariinta - In la wanaajiyo qanacsanaanta macaamilka, la xalliyo wada sheekaysiga, iyo in la xiro heshiisyo lala wadaago farriinta 2-dhinac ah. Isticmaal lambarkaaga hadda ama mid cusub hel!
Qoraallada loo qorsheeyay - Qor taariikh iyo waqti cayiman oo qoraalkaaga ah. Jadwal u samee farriimaha saacadaha, maalmaha, ama bilaha ka hor markaa dib u fadhiiso, oo naso. Waan qabaneynaa inta hartay.
Xayeysiinta qorayaasha - Ka ilaali dhagaystayaashaada qoraallo taxane ah oo isdaba joog ah maalmo, usbuucyo, ama bilo. Ku habboon abuurista ololeyaal faleebo.
Keeno Xiriirada - Horeba liis baa kuugu jira? Si fudud u soo dhoofsada xiriiradaada ilbiriqsiyo. Ku dar goobo dheeraad ah sida Email, Magaca, iyo Xusuus-qor si aad ugu adeegsato farriimaha shaqsiga ah.
Tiro badan - Ku dar lambarro taleefanno badan hal koonto. Hubso in farriinta saxda ah ay gaarto waaxda saxda ah, wakiilka, ama goobta adoo mid kasta u xilsaaraya xariiqdiisa.
MobileTexting Mobile - Hel marin u hel dhammaan astaamaheena awoodda badan, xitaa markaad safarka ku jirto. Barnaamijyadeenna macruufka iyo macruufka 'Android' waxay kuu oggolaanayaan inaad ka maamusho ololahaaga meel kasta oo aad joogto.
Fureyaasha SMS - Mid ka mid ah hababka ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee loo soo ururiyo lambarrada taleefannada loona kobciyo liiskaaga macmiilka ayaa ah in la abuuro lana dhiirrigeliyo erayga SMS-ka.
Fariin Dheeraad Ah - Meelaha badankood waxay kugu xaddidayaan qoraallada dhererkoodu yahay 160 xaraf oo keliya. Waxaan ku siineynaa ilaa 304 xaraf si aad u diri karto fariimo kafiican oo faahfaahsan.
Suuqgeynta MMS - MMS waxay kuu oggolaanaysaa inaad kor u qaaddo ololayaashaaga farriinta qoraalka oo ay ku jiraan rasiidh, sawirro wax soo saar, iyo warbaahin kale oo hodan ah. Waxaad helaysaa ilaa 1,600 xaraf oo qoraal ah, sidoo kale.
Sawirrada lifaaqa - Kumaa yidhi qoraalka waa 160 xaraf oo keliya? Sawir qiimihiisu yahay 1,000 eray. Ku kobci qoraaladaada sawirro qurxoon ama rasiidh sasabasho ah.
Goobaha Gaarka ah - Maamul xogtaada oo u dir ololeyaal qoraaleed shaqsiyeed. Barnaamijkeena waxaa ka mid ah dhowr goobood oo loogu talagay, laakiin waad abuuri kartaa inta aad u baahan tahay.
Data Collection - Ma dooneysaa inaad wax badan ka ogaato macaamiishaada? Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad weydiiso. Waxaan ku keydin doonaa xogtaada Goobaha Khaaska ah si loogu isticmaalo ololeyaasha mustaqbalka.
Qeybaha - Qeybaha ayaa sahlaya in lagu daro dhagaystayaasha bartilmaameedka istiraatiijiyadda suuqgeynta qoraalkaaga. Ku billow inaad dirto ololeyaal xariif ah, oo khuseeya maanta!
Raadinta Link - Eeg inta jeer ee iskuxirayaashaaga gaagaaban lagu riixo falanqayntayada sare. Raad raac natiijooyinka oo cabir guusha olole kasta.
Baroorta - Muuqaalka asxaabta kooxda 'SimpleTexting' ma aha oo kaliya inuu kuu ogolaado inaad ku darto isticmaaleyaal dheeri ah liisaskaaga, laakiin wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka aad ugu qoondeyso isticmaale kasta oo cusub lambarka taleefankooda.
Farriimaha Away - Muuqaalka fariinta fog ee SimpleTexting wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameysato fariin otomaatig ah oo ka jawaabeysa xiriirada markaad xafiiska ka baxdo ama daaqad hore loo sii dejiyo.
Mawduucyada & Nuqullada - Waqti badbaadi adoo dib u isticmaalaya fariimahaaga sida joogtada ah loo soo diro, ololeyaasha, jawaabaha sanduuqa, isweydaarsiyadayaasha, iyo fariimaha xaqiijinta ereyga.
Kiciyaasha - Macaamiisha kula soo noqo xawaare hillaac ah. Kiciyeyaasha, waxaad si otomaatig ah uga jawaabi kartaa su'aalaha guud iyo codsiyada macluumaadka.
Eeg Natiijooyinkaaga - Muuji macaamiishaada, farriimahaaga, iyo koritaanka ereyga muhiimka ah oo leh garaafyo qurux badan, shabagyo, iyo jaantusyo. Waa inaad u aragtaa inaad rumeysato.
Qoraal ku guuleysta - Xeelad suuqgeyn xayeysiis ah oo casriyeysan, xaaqmooyinka SMS-ka ayaa fudud in la galo oo fudud in la dejiyo. Intaa waxaa sii dheer, waa hab fiican oo loogu daro macaamiisha.
Qoraal ugu dir Sahannada Codbixinta - Ka hel jawaab celin deg deg ah macaamiisha codbixin qoraal ah. Samee xulashooyin badan oo xitaa la wadaag natiijooyinka waqtiga-dhabta ah ka-qaybgalayaashaada.
Macaamiisha Codbixinta - Marka la codeeyo, way ka sahlan tahay sidii hore in laga helo jawaab celinta macaamiishaada. Kaliya u dir su'aashaada oo sug jawaabaha inay ku soo rogaan.
Xidhiidhada Yaryar - Badbaadso jilayaasha qiimaha badan. U rogo xitaa URL-yada ugu dheer qaab xiriiriyeyaal yar-yar oo saaxiibtinimo leh. U dir xiriiriyeyaasha bogagga, fiidiyowyada, waxyaabaha la soo dejisan karo, ama barnaamijyada.
Lambarkaaga Qoraal-Ku Karti - Hesho oo ka jawaab fariimaha qoraalka ah ee lambarka taleefankaaga ganacsi ee jira adigoon saameyn ku yeelan adeeggaaga codka.
Ogeysiiska riix - Iyada oo ogeysiisyada riixitaanka desktop-ka ah, waad ka fogaan kartaa SimpleTexting adigoon ka welwelin wixii farriimo ah ee seegay!
Dhibcaha Rogaal celinta - Isticmaal 'em ama lumiso' em? Mar dambe maahan! Dhibcaha aan la isticmaalin ayaa hadda rogrogaya. Waad xajin kartaa dhibcahaaga hadhay illaa dhammaadka bisha xigta.
Qoraalka Kooxda ee Telefoonka - U dir fariin qoraal ah macaamiishaada, xitaa haddii aadan heli karin kombuyuutar. Kaliya farriin noo soo dir liiska aad jeclaan lahayd inaad farriin u dirto oo waxaan u riixnaa dadka saxda ah.
Liisaska Is-Nadiifinta - Nidaamkeenu wuxuu si otomaatig ah u hubiyaa lambarada dhintay mar kasta oo aad farriin dirto oo aad ka saarto markay arkaan. Looma baahna inaad si joogto ah ula socoto!
Qoraalada Dhalasho ee otomaatiga ah - Kala jeeg keegga iyo confetti: waa waqtigii loo dabbaaldegi lahaa dhalashada. SMS-keena dhalasho otomaatig ah wuxuu qaadanayaa laba daqiiqo in la dejiyo waana hab fiican oo lagu farxo macaamiishaada.
Isku day SimpleTexting Bilaash
Isdhexgalka SMS SimpleTexting
Foomamka Internetka - U oggolow taageerayaashaadu inay doortaan farriimahaaga qoraalka isla markiiba boggaaga. Nuqul deg deg ah iyo dhejis ayaa ah inta ay qaadaneyso in lagu dhejiyo mid ka mid ah foomamkeena fudud boggaaga.
Isdhexgalka Mailchimp - Ma heshay xisaab Mailchimp ah? Ku dheji 'SimpleTexting' oo bilow inaad la wadaagto xiriirada u dhexeeya labada madal. Mar dambe ma jiri doonaan dhoofinta iyo soo dejinta gacanta!
API - Kudar awooda qoraalka qoraalka nidaamkaaga jira. Ku dhex dar SimpleTexting adoo adeegsanaya API-geena awooda badan. Si wada jir ah ayaan u dhisi doonaa alaab qurux badan oo SMS karti u leh.
Isdhexgalka Zapier - Isdhexgalkeena Zapier wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameysid habab toos ah adoo ku xiraya SimpleTexting ilaa 1,000+ barnaamij oo ay kujiraan Gmail, Facebook iyo inbadan.
Apps - Ku xirnow SimpleTexting barnaamijyada shabakadda ee aad horay u isticmaasho. U qaad suuqgeyntaada heerka ku xiga adoo kudaraya fariimaha qoraalka isku darka.
Shaacinta: Anigu waxaan ku xirnahay Xikmad oo waxaan adeegsanayaa xiriiriyeyaal ku xiran qodobkaan.
Tags: keywordsmailchimpMMSmms suuq geynmarketing mobilebarnaamijka sms mobileqoraalada la qorsheeyaynidaamka fariinta gaagaabanshortcodefududayntaSMSsms apijawaabaha smssms bedelkasms ctrereyada muhiimka ah ee smssms suuq geyntasms qaybsanaantafoomka sms-kafarriinta qoraalka suuqgeyntacodbixinta farriinta qoraalkafariin qoraal ahfariin qoraal apiqoraal si aad u codeysoqoraal ku guuleystozapier